100 casho kaddib, xaguu ku dambeeyay dilkii Khaashuqji? | Biyoguurenews.com
Home Wararka 100 casho kaddib, xaguu ku dambeeyay dilkii Khaashuqji?
Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee waddanka Mareykanka Mike Pompeo ayaa booqasho ku jooga dalka Sucuudi Carabiya, welina waxa uu raadinayaa jawaabo ku aadan dilkii weriye Jamaal Khaashuqji, xilli dhanka kalana uu isku dayayo inuu xoojiyo xiriirka dalkiisa kala dhaxeeya boqortooyada.
Mr Khaashuqji ayaa ku noolaa dalka Mareykanka hasayeeshee waxaa dabayaaqadii sanadkii hore lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Turkiga, dilkiisana waxa uu madmadow soo kala dhexgaliyay xiriirkii u dhaxeeyay Riyaad iyo Washington.
Haddaba todobaadkan ayey 100 maalmood ka soo wareegatay dilka weriye Jamaal Khaashuqji, dadkuna waxa ay isugu soo baxayeen bannaanka hore ee qunsuliyadda si ay u xasuustaan iyo weliba sidii ay cadaalad ugu raadin lahaayeen.
Previous articleMaxey daarneyd negaanshaha Assiase Afworke laba caano maal Mugdisho
Next articleSkeeko Layab leh oo nin drawal ahi uu u xidhnaa mudo labo sano ah